ကိုယ်ကျိုးကို မကြည့်ဘဲ အများအကျိုးရှိတဲ့ အလှူတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး
May 10, 2019 - by Editor
ကိုယ်ကျိုးကို မကြည့်ဘဲ အများအကျိုးရှိတဲ့ အလှူတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ခြင်္သေ့ကြီးတစ်ကောင်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကုန်ကျမှာလဲ ဒကာကြီးရဲ့။ ပစ္စည်းဖိုးရော လက်ခပါ အပါအ၀င်ဆိုရင် ခြင်္သေ့ရုပ်တစ်ကောင်ကို ၄၀၀၀ိ/-ကျော်လောက်ကုန်ကျပါမယ်။ နှစ်ကောင်ဆိုတော့ ၈၀၀၀ိ/-ကျော် ၉၀၀၀ိ/-လောက် ကုန်ကျပါမယ်ဘုရား။ ဒကာကြီးရယ် ဒီလောက်အကုန်အကျခံပြီး ပြုလုပ်ပေမယ့် ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်အောက်မှာ မိုးရွာ နေပူလို့မှ လူတစ်ယောက် ခိုလှုံလို့ မရပါဘူး။ မလုပ်ချင်ပါနဲ့ ဒကာကြီးရာ။ သဘာဝခြင်္သေ့ကြီးတွေဆိုတော့ လူအများ …
HISTORY / KNOWLEDGE
တရုတ်တွေ ဖျောက်ထားတဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းတစ်ခု
ရှည်လျား ကျယ်ပြောသော နယ်နိမိတ် ထိ စပ်မှု သည် မြန်မာပြည်နှင့် တရုတ်ပြည် အကြား နှစ်ပရိစေဒ ကြာမြင့်စွာ ပြဿ နာ အလျည်း မရှိပဲ ခွဲခြား တည်ရှိခဲ့ပါသည်။မင် မင်းဆက် (၁၃၈၀-၁၃၈၈ အေဒီ) လက်ထက် တွင် တရုတ် တို့သည် ယူနန် နယ်အား ၄င်း တို့၏ နယ် နိမိတ် …
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ပုဂံကုို ဗုံးကြဲမခံရအောင် ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ပါမောက္ခ
ဒေါက်တာလုစ်ကို သမိုင်းပါမောက္ခအဖြစ် သိကြပါတယ်။ မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်ကအဆိုကို တင်သွင်းသူနဲ့ ပုဂံအကြောင်း စာအုပ်ကြီး သုံးတွဲ ရေးခဲ့သူအဖြစ် မြန်မာပြည်မှာ သိကြပါတယ်။ ပုဂံကို ဗုံးကြဲမခံရအောင် သူကာကွယ်ခဲ့တာကိုတော့ သတိမူမိသူ နည်းပါတယ်။ ၁၉၄၄ ခုနှစ် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း လန်ဒန် အရှေ့တိုင်းပညာသင်ကျောင်းမှာ ခေတ်ဟောင်း မြန်မာဘာသာ၊ ပျူနဲ့ မွန်ဘာသာ ကထိကအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေတဲ့ …
ယောကျာ်းတွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲက မြွေဟောက်ဆံပင်နဲ့ မီဒူဆာ ဇာတ်ကြောင်း
မီဒူဆာ အကြောင်း Medusa ကတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြားဖူးကြတဲ့ဂရိ ဒဏ္ဍာရီထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ ။ သူ့ကို စစ်သည်တော်များစွာက သတ်ဖြတ်ပြီးသူ့ခေါင်းကိုဖြတ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ် ဒါပေမယ့် အားလုံးကျရှုံးခဲ့ပါတယ် Zeus ရဲ့သားတော် Perseus ကလွဲရင်ပေါ့ Medusa ရဲ့ပုံစံ ကတော့ မြွေတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းနဲ့ သူ့ဆံပင်တွေက မြွေဟောက်တွေဖြစ်ပြီး သူ့ကို ကြည့်မိတဲ့လူတိုင်း ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားစေနိင်တဲ့အစွမ်းရှိသူပါ… မီဒူဆာပေါ်ပေါက်လာပုံ Medusa က …
မိတ်ဆွေတို့ ဆိုးနေတဲ့ကံကို (၁) လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန် နည်းလမ်း(၅)သွယ်
May 5, 2019 - by Editor
ကံကောင်းလာစေရန် (၁) လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန်နည်းလမ်း(၅)သွယ် 1. မိမိဝင်ငွေ မည်မျှပင် နည်းပါးပါစေ 10ပုံ 2ပုံကို လှူပါ။ ရရှိလာသော ဝင်ငွေမှ ဖယ်ထား၍ မြတ်စွာဘုရားကို ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ. ပန်းတစ်စည်း ဖြစ်စေ လှူပါ။ မိဘများသက်ရှိထင်ရှားရှိလျင် မိဘများကိုလည်း လှူပါ 2. ဘာသာရေးအတွက် အချိန်ပေးပါ။ မည်မျှပင် အလုပ်ရူပ်သည် ဖြစ်စေ. တစ်နေ့လျင် …
သောက်စရာ ဗော်ကာ (Vodka) မပေးလို့ ကိုယ့်တပ်ကို အမြောက်နဲ့ထုတဲ့ အရာရှိ
May 2, 2019 - by y k
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှ တပ်နီတော်စစ်သားတွေကို ရာရှင်အဖြစ် တစ်ရက်ကို ဗော်ဒ်ကာ ၁၀၀ ဂရမ်သာ ထုတ်ပေးပါတယ်။ ၁၀၀ ဂရမ်ဆိုတာ ရုရှားနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့ အာစွတ်ရုံလောက်ပဲ ရှိတာကိုး။ အရိုးခိုက်အောင်ချမ်းလွန်းလှတဲ့ နှင်းထုကြီးအောက်မှာ စတာလင်ဂရက်မြို့တော်ကြီး နာဇီလက်အောက်မကျရောက်ရေးအတွက် ခုခံနေရတဲ့ တပ်နီတော်စစ်သားတွေအတွက် ရိက္ခာထက် ဗော်ဒ်ကာရေပ်တည်ဖို့မလွယ်လှဘူးလေ။ ဌာနချုပ်က ပို့ပေးနေတဲ့ ဗော်ဒ်ကာပုလင်းတွေနဲ့ရိက္ခာထုပ်တွေဟာလည်း ဂျာမန်တို့ရဲ့ လေကြောင်းကြားဖြတ်မှုကြောင့် လေထဲမှာပဲပျက်စီးသွားသလို ဗော်လ်ဂါမြစ်လယ်ခေါင်မှာ …
အင်္ဂလိပ်တွေတည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့  မြေအောက်မှ မဟာလျှို့ ဝှက်ချက်များ
April 29, 2019 - by Editor
အင်္ဂလိပ်တွေဟာ မြန်မာနိူင်ငံကို သိမ်းပိုက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ ကို အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ မြို့ အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။မြို့ တော် ကို စနစ်တကျ မြို့ပြအင်္ဂါရပ်တွေ နဲ့အညီတည်ဆောက်ခဲ့ကြ တယ်။ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ တွေ ကို ကန်ထရိုက်ပေးပြီး မြေအောက် ရေဆိုး ထုတ် ဥမင် ကွန်ယက် စနစ်တွေကို အင်္ဂလန် အတိုင်း တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီ မြေအောက် ဥမင် ကွန်ယက် စနစ်ကြီးကို …
အယုဒ္ဓယမြို့ကို မြန်မာဘုရင်တွေ ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက် တောင်းပန်တဲ့ ဦးနု
April 22, 2019 - by Editor
ကွယ်လွန်သူ ကဗျာဆရာ နဲ့ စာပေပညာရှင် ဇော်ဂျီကို မြန်မာမှု အနုပညာတွေ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ခေတ်စမ်း စာရေးဆရာကြီး အဖြစ် လူသိများကြပါတယ်။သူမရှိတာ အနှစ် ၃ဝ နီးနေပေမယ့် ပိတောက်ပန်း၊ ဗေဒါလမ်း၊ ရှေးခေတ်ပုဂံပြည် စတဲ့ သူ့စာကဗျာတွေကို ဖတ်ရှု ရွတ်ဆိုနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူသိမများတဲ့ အချက်က ဇော်ဂျီတည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ ထိုင်းမြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။စာပေဗိမာန် …
မန္တလေးတမြို့လုံးကို ညဖက်မှာ လှည့်ပတ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ မြို့စောင့်တစ္ဆေကြီး ထိပ်တင်ကြီး
April 17, 2019 - by y k
၁၂၂၁ မင်းတုန်းမင်းနဲ့ ကနောင်မင်းသားတို့က နောင်တော် ပုဂံမင်းကို ပုန်ကန်နန်းချတယ် မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်ပြီး သိပ်မကြာဘူး အင်းဝနေပြည်တော်ကြီးကို ဖျက်သိမ်းပြီး မန္တလေး ရတနာပုံ နေပြည်တော်မှာ မြို့သစ်တည်ပြီး နန်းတော်သစ် တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ( အင်းဝနန်းတော်ကြီး ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ နန်းတော်က ကျွန်းတိုင်လုံးကြီးတွေ ပျဉ်ပြားတွေကို မြို့စာရေး ဦးပိန်က ယူဆောင်ပြီး တောင်သမန်အင်းကိုဖြတ် သူ့နာမည် ဦးပိန်တံတားဆိုပြီး တည်ဆောက် …
April 13, 2019 - by y k
သန်လျက်ဆိုသည်မှာ ရှေးအခါက မြန်မာဘုရင်များစစ်သူရဲကောင်းများသာ ကိုင်စွဲရသော ထက်ရှလွန်းသည့် စစ်လက်နက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။သန်လျက်ကို ထိုးရာ၌၎င်း၊ ခုတ်ရာ၌၎င်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ မင်းမြှောက်တန်ဆာ ငါးပါးတွင် သန်လျက်သည် မပါမဖြစ်ပါဝင်ရသော မင်းမြောက်တန်ဆာတစ်ခု လည်းဖြစ်သည်။ မင်းခမ်းမင်းနားများတွင် သန်လျက်ကို လင်္ကျာမင်းခမ်းတော်အဖြစ် တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် `လင်္ကျာတော်က၊ ရွှေလှော်သိင်္ဂါ၊ မျက်စိမြွှာသား၊ ရတနာသန်လျက်၊ လျှံလက် လျှပ်လျှပ်၊ သားမြီးယပ်နှင့်….´ စသည်ဖြင့် စပ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ရှေးအခါက …